Iindaba -Ngowama-2026, intengiso yezityalo ezahlulayo emoyeni iya kubona ukukhula okukhulu
I-DBMR yongeze ingxelo entsha ebizwa ngokuba yi "Air Separation Equipment Market", equlathe iitafile zedatha yeminyaka nembali. Ezi tafile zedatha zimelwe "yingxoxo kunye neegrafu" ezisasazeka kwiphepha kwaye kulula ukuluqonda uhlalutyo oluneenkcukacha. Ingxelo yophando yezixhobo zokwahlula umoya inika uhlalutyo oluphambili lweemeko zentengiso zabavelisi bokuzahlula umoya, kubandakanya ubungakanani bemakethi, ukukhula, isabelo, imikhwa, kunye nolwakhiwo lwexabiso kumzi mveliso. Xa simisela le ntengiso yehlabathi, kufuneka sigxile kuhlobo lwentengiso, isikali sombutho, ubukho bendawo, uhlobo lombutho womsebenzisi wokugqibela, kunye nokufumaneka kweengxelo zorhwebo lwezixhobo zomoya eMantla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu, eAsia Pacific naseMbindi Mpuma naseAfrika. Ukukhula kwemarike yezixhobo zokwahlula umoya kuqhutywa ikakhulu kukukhula kwenkcitho ye-R & D, kodwa imeko ye-COVID yamvanje kunye nokwehla kwezoqoqosho kuyitshintshile imo yentengiso epheleleyo.
Isixhobo sophando lwezixhobo zokwahlula umoya kwimarike sinika abathengi ezona ziphumo zibalaseleyo, kwaye ingxelo iveliswa kusetyenziswa iindlela ezihlanganisiweyo kunye netekhnoloji yakutshanje. Ngale ngxelo yentengiso, kulula ukuseka nokwandisa inqanaba ngalinye lenkqubo yobomi kumjikelo wobomi, kubandakanya ukuthatha inxaxheba, ukufunyanwa, ukugcinwa nokwenza imali. Ingxelo yentengiso iqhube uhlalutyo olubanzi lolwakhiwo lweemarike kwaye yavavanya amacandelo ahlukeneyo entengiso kunye namacandelwana omzi mveliso. Ukungathethi, ezinye iitshathi zisetyenziswe ngokufanelekileyo kwingxelo yezityalo zokwahlula umoya ukubonisa iinyani kunye nedatha ngendlela echanekileyo.
Phakathi kwabakhuphiswano abaphambili abasebenza ngoku kwimakethi yokuzahlula umoya, bambalwa i-Air Liquide (eFrance), iLinde (Ireland), Praxair Technology Co, Ltd. (UK), Air Products Co, Ltd. (USA), Messer Group Co, Ltd. (Jemani), Taiyo Nippon Sanso Corporation (eJapan), Uig (USA), Enerflex Co., Ltd. (Canada), Technex, Astim (Europe), Bd | Isensors GmbH (Germany), Toro Equipment (Europe), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Europe), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Germany), Instrument & Supply, Inc. (eMelika ), Jbi Amanzi kunye namanzi amdaka (eUnited States), H2Flow Equipment Inc (Canada), Haba Tuotteet (United States), Eco-Tech, Inc. (United States), Rcbc Global Inc (Germany) kunye nezinye iinkampani.
Imakethi yezixhobo zokwahlula umoya kulindeleke ukuba zikhule ukusuka kwixabiso eliqikelelweyo lokuqala le-USD 3.74 yezigidigidi kwi-2018 ukuya kwixabiso eliqikelelweyo le-USD 5.96 yezigidigidi kwi-2026, ngenqanaba lokukhula ngonyaka le-6% ngexesha lokuqikelela kwe-2019-2026. Ukunyuka kwexabiso lemarike kunokubangelwa yimfuno eyandayo yeemveliso ze-photovoltaic kunye neendlela zokubonisa iplasma.
Ukuze uqonde ubukhulu becala amandla okusasazeka kwemarike yezixhobo zomoya, sahlalutya imakethi yezixhobo zokwahlula umoya kwihlabathi kwimimandla ephambili yehlabathi.
Ubhubhane we-COVID-19 wenze i-bottlenecks kuyo yonke imibhobho yeshishini, amajelo entengiso kunye nemisebenzi yokuthenga. Oku kubeka uxinzelelo lohlahlo-lwabiwo mali kwinkcitho yenkampani ziinkokheli zeshishini. Oku kukonyusa ibango lohlalutyo lwamathuba, ulwazi ngokwamaxabiso kunye neziphumo zokhuphiswano. Sebenzisa iqela le-DBMR ukwenza amajelo amatsha okuthengisa kunye nokuhlala kwiimarike ezintsha ezazingaziwa ngaphambili. I-DBMR inceda abathengi bayo ukuba baphuhle kwezi marike zingaqinisekanga.